Moe Kai: Under cover
ဟိုးတလောက ရောက်လာတဲ့ စိတ်ရောဂါသည် တယောက်ကလဲ ပြောပါသေးတယ်။ သူ ဒီဆေးရုံနဲ. အင်္ဂလန်ရဲ. ကျန်းမာရေး စနစ်ကြီး (NHS) ကို Bomb ဖောက်မလို. Bomb တီထွင်နေတယ်တဲ့။ အောင်မြင်ခါနီးပြီ ဆိုဘဲ။ သူ.ရဲ. စီမံကိန်းကြောင့် စစ်ဆရာဝန်တွေရဲ. ကုသတာကို သူ မခံနိုင်ဘူးဆိုပါတယ်။ ဘယ်လုိုများတီထွင်နေတာလဲ ပြောပြပါဦးဆိုတော့ .. သူ.ရဲ. စီမံကိန်း မအောင်မြင်မှာ စိုးလို. ပြောလို. မဖြစ်ဘူး ဆုိုဘဲ။
တခါတလေ ဒီလူနာတွေ ပြောပြတဲ့ သူတို.ရဲ. တကယ့် ဘဝ ဇတ်လမ်းတွေ၊ ဒါမှမဟုတ်၊ သူတို.ရဲ. စိတ်ကူးယဉ် ဇတ်လမ်းများတွေဟာ အလွန်စိတ်ဝင်စားဖို. ကောင်းသလို ကျမရဲ. အလုပ်ကို ပိုပြီး စိတ်ဝင်စားစရာ ဖြစ်စေပါတယ်။ ဒီလိုဘဲ အလုပ်မှာ ကြံဖန်ပြီး အကောင်း ဆွဲတွေးပေးရတယ် ဟုတ်။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ အခု အင်္ဂလန်မှာက ဘယ် Specialty မှာမဆို နေ.စဉ်တွေ.ရတာက အသက် ၈၀၊ ၉၀ ကျော် လူနာတွေပဲကိုး။ တော်သေးတယ် ကိုယ်ယူထားတဲ့ အားကစား ဆေးပညာမှာ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ် အားကစာသမားလေးတွေ တွေ.ရသေးလို. ..။